यी हुन् कतार विश्वकप खेल्ने ३२ राष्ट्र, यसपटकको दाबेदार को ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
यी हुन् कतार विश्वकप खेल्ने ३२ राष्ट्र, यसपटकको दाबेदार को ?
धरानः कतारमा हुने फिफा विश्वकप फुटबलका लागि ३२ वटै राष्ट्रको टुंगो लागेको छ । अघिल्लो दिन पेरुलाई पेनाल्टीमा ५–४ गोलले हराउँदै अष्ट्रेलिया छनोट भएपछि कोस्टारिका पनि आफ्नो खेल जित्दै छनोट भएको हो ।
गएराति कोस्टारिकाले न्युजिल्याण्डलाई १-० ले पराजित गर्दै विश्वकपको टिकट काटेको हो । कोस्टारिकासँगै विश्वकप खेल्न ३२ वटै राष्ट्रको टुंगो लागेको हो । अघिल्लो दिन अष्ट्रेलिया फ्रान्स, डेनमार्क र ट्युनिसियाको ग्रुप डीमा परेको थियो ।
न्युजिल्याण्डलाई पराजित गरेको कोस्टारिका स्पेन, जर्मनी र जापान रहेको समूह इमा परेको छ । आठवटा ग्रुप प्रत्येकमा ४ जना टिम छन् । जसलाई समूह ए देखि एचसम्म बाँडिएको छ । विश्वकप आगामी मंसिर ५ देखि पुस ३ सम्म चल्नेछ ।
कुन कुन देशले खैल्नदैछन् विश्वकप
कुन देशले कतिपटक जिते विश्वकप ?
अहिलेसम्म ८ वटा देशले मात्रै विश्वकप उचालेका छन् । सबैभन्दा धेरैपटक विश्वकप फुटबल जित्नेमा ब्राजिल छ । ब्राजिलले पाँच, जर्मनी र इटालीले चार–चारपटक विश्वकप उचालेका छन् । अर्जेन्टिना, फ्रान्स र उरुग्वले दुई–दुई पटक जितेका छन् । स्पेन र इंल्याण्डले एक–एकपटक विश्वकपको उपाधिमाथि कब्जा जमाएका छन् ।
यसपटकको दाबेदार को ?
यसपटक बलियो अवस्थामा देखिएका ब्राजिल र अर्जेन्टिनालाई विश्वकपको प्रमुख दाबेदार मानिएको छ । पछिल्ला खेलको तुलनामा ब्राजिल र अर्जेन्टिना बलियो देखिएको युरोपकै कतिपय संचारमाध्यमले चर्चा गरेका छन् । मेसीप्रेरित अर्जेन्टिना पछिल्लो ३३ खेलमा अपराजित रहेको छ ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन फ्रान्स फेरि पनि बलियो दाबेदार हो । तर नेसन्स लिगमा भने उसले कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । तर जुनसुकै बलिया टिमलाई ढलाउन सक्ने क्षमतावान खेलाडी फ्रेन्च टिममा छन् । फ्रान्सको बेञ्च नै अरु देशको टिमभन्दा बलियो देखिने गर्छ । यसैले नेसन्स कपमा पराजित भए पनि फ्रान्सलाई दाबेदार टोलीमै राखिएको छ । केलियन एम्बाप्पे, एन्टोनी ग्रिजम्यान, करिम बेन्जमा जस्ता आक्रामक स्कोर भएको फ्रान्स बलियो टोलीमा पर्छ ।
त्यस्तै स्पेन, जर्मनी अर्का दाबेदार टोली हुन् । जर्मनीकाे पनि नेसन्स कपमा खराब लय कायम छ । युरोपबाट इंग्ल्याण्ड, बेल्जियम, नेदरल्याण्डस् र पोर्चुगलले पनि जुनसुकै टिमलाई हराउने सामथ्र्य राख्छन् । यसैले यी टिम पनि विश्वकपका दाबेदार हुन् ।
धरानमा ‘बी’ क्याटोगोरीको फुटसल टुर्नामेन्ट हुने